Samsung dia hanangana ny tsenan'ny smartphone amin'ny teknolojia 4 | Androidsis
Androany lasa izay dia fantatsika fa Samsung dia manomana zavatra tsara miaraka amin'ilay sensor-n'ny fantsom-pifandraisana hita maso, izay azo inoana fa hiseho amin'ny Galaxy S10. Ary tsy teknolojia resahan'i Samsung fotsiny izany, fa hatramin'ny telo hafa, manampy 4, izay hialana amin'ny tsenan'ny tsena..
Ny notch dia ny hevitra azon'i Apple ny satroka ambony hanandrana "manavao" amin'ny zavatra iray. Sehatra efijery iray tavela amin'ny lafiny iray ary ny iray hafa misy ireo sensor fakantsary samihafa. Ny hevitr'i Samsung dia ny hanafoanana an'io notch io mba hiala amin'ny finday "écran rehetra" mankany amin'ireo izay eo alohany dia eo amin'ny efijery.
1 Samsung dia hanova ny tontolon'ny smartphone
2 Teknolojia 4 hanovana smartphone
3 Notch notch
Samsung dia hanova ny tontolon'ny smartphone
Steve Jobs dia efa nilaza izany tamin'ny androny: "Ny fanavaozana dia mampiavaka ny mpitondra amin'ny mpanaraka". Amin'ny fampiasana teny vitsivitsy avy amin'ny iray amin'ireo haitaoan'ny haitao vaovao, dia hitantsika fa miresaka isika, araka ny asehon'ilay sary prototype nozarain'i Samsung tenany ihany, ny mety ho smartphone iray fa ny habaka rehetra eo anoloana dia ho an'ny efijery.
Eny, hadinoy ireo lavaka ireo ho an'ny solomaso fakantsary anoloana, na ny an'ny mpandahateny, na ireo bezela aza miha mahia; toy ny an'ny Galaxy S9 na Note 9. Ny rehetra dia ho efijery mba hiova be ny zavatra niainan'ny mpampiasa izay mahazatra antsika isan'andro.
Ary izao dia mipetraka ny fanontaniana, momba ny cAhoana no hahafahan'izy ireo mampifanaraka ny fakantsary, ny mpandahateny ary ny sensor amin'ny dian-tànana ambanin'ny efijery? Miaraka amin'ny teknolojia 4 izay vao niseho andro lasa izay tany Korea Atsimo.
Teknolojia 4 hanovana smartphone
Ireo no ilay Teknolojia 4 miaraka amin'i Samsung te-hanova ny eo alohan'ny finday avo lenta:
FOD: teknolojia sensor momba ny fantsom-baravarankely eo ambanin'ny fisehoana.
UPS: teknolojia sensor etsy ambanin'ny efijery izay ampidirina ny fakantsary.
HoD: teknolojia ho an'ny fahatsapan-tanana.
SOD: ilay ahazoana antoka fa mivoaka amin'ny efijery ilay feo.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka momba ny mpamaky rantsan-tànana eo amin'ny efijery mihitsy isika, mpandahateny izay tafiditra ao anaty tontonana, teknolojia manatsara ny "touch" ny efijery ary ny iray hafa natokana hijerena ny tarehy; marina ilay mifandray amin'ny fakantsary.
Amin'ny rehetra, ny tena mahaliana sy mampiavaka azy dia ny fiasan'ny UPS, izay ahafahanao mametraka ao ambanin'ny efijery sady scanner iris no fakan-tsary. Ka ny fakan-tsary voalohany dia mety "miafina" ao ambanin'ny efijery.
Raha ny fantatrao dia ny Ireo sensor dia 'hitsingevana' ao ambany vera amin'ny endrika semi-opaque fa tsy hanakana ny "visibilité" izany. Ny sary zarainay dia mampiseho izay voalaza. Raha tena miatrika zava-misy amin'ny teknolojia UPS isika dia mety miresaka momba ny fitaovana mety ho efijery rehetra avy amin'ny lafiny iray mankany amin'ny lafiny iray hafa.
Misy ireo izay tia ny Notch, ary misy ireo izay mahita azy io ho zavatra mahatsiravina indrindra natao ho an'ny famolavolana finday avo lenta. Efa nohazavaina fa miatrika singa iray izay tetezamita madio mandra-pahatongan'ny fandrosoana manaraka.
Apple io ary kofehy tsara Mpanamboatra Android izay nametraka amin'ny herin'ity fampiasa ity eo alohan'ny finday marobe. Na dia izany aza Samsung irery ihany no nahatoky a aza apetraka izany inona, amin'ny telefaona toy ny Pixel 3 toa mahafaty (raha ny marina, ry zalahy Google nanandrana nanafina izany izy ireo amin'ny fampisehoana azy toy ny hoe).
Ankehitriny, raha mandeha ny teknolojia UPS an'ny Samsung dia tsy isalasalana fa horaisin'ny sisa amin'ny indostria, izay hahita tsara ny faran'ny famolavolana notch amin'ny karazana finday rehetra.
Amin'izao fotoana izao dia tsy haintsika rahoviana no hampiditra ireo haitao vaovao ireo i Samsung. Araka ny Samsung Mobile News, andrana amina prototypes vitsivitsy ny UPS ary tsy ho tonga raha tsy amin'ny taona 2020. Na izany na tsy izany, ny orinasa koreana dia efa nilaza fa ny Galaxy S10 dia hisy fiovana lehibe amin'ny famolavolana, ny Galaxy S10 rehetra efijery tokoa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ireo teknolojia 4 vaovao sy mahatalanjona izay hamonganan'i Samsung ny toerana misy ny tsena
Ny Google Pixel 3 sy Pixel 3 XL sasany dia tsy mitahiry ireo sary nalainy